देशमा राजनेताको अभाव खड्कीएकै हो ? – Etajakhabar
राजन कार्की निर्वाचन हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन हुनु होइन । निर्वाचन अघिका नैतिक क्रियाकलाप र निर्वाचनपछिका विधियुक्त कामकारवाहीहरुले संविधानको मापन गर्ने हो । नैतिकपतन हुनेखालका र संविधान विरोधी चरित्र देखाएर संविधान कार्यान्वयन भयो भन्नु गलत हो, संविधान कार्यान्वयनका लागि विधिले निर्धाारित गरेको मार्गमा तलमाथि नहुने गरी, लोभलालच र स्वार्थ नराखीकन, लोकलज्जा मानेर चल्नु चलाउनु जरुरी छ । यी कुनै पनि धर्म सत्ताधारी र संसदमा पुगेकाहरुले निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन भयो, हुनथाल्यो भन्ने कुरा आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तै हो ।
खोटो चिज समाजले अस्वीकार गर्छ भने खोटो लोकमत बोकेर राजनीतिक दलहरुले कहिलेसम्म त्यसलाई स्वार्थका लागि भजाइरहन सक्छन् ? यो यक्ष प्रश्न हो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावमा जे देखियो, अव प्रदेश र संसदको निर्वाचनका लागि सत्ता र प्रतिपक्षमा एउटै दल बसेर जुन तमासा देखाइएको छ, त्यो पनि आश्चर्यचकित पार्ने खालको दृश्य हो । राजनीतिमा धमिरा लागेका यस्ता दृश्यले समाज बलियो हुन्न । आवधिक निर्वाचन ५ वर्षका लागि हुने प्रावधान छ । त्यसपछि दलहरुले ताजा जनादेश लिन जनतासमक्ष जानैपर्छ । तर संविधान जारी भएपछि पनि दलहरुले संविधानसभालाई संसदमा बदलेर खाइरहे, डकारीरहे । यसरी देशविरोधी, संविधान र लोकाचारविरोधी काम गर्नेहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्छन् । तमासा देखाइहेका छन् ।
आफ्नो म्याद विधिबाट होइन, आफै थप्ने र विधिलाई कुल्चेर ठूला दलको सहमतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ, जुन गलत र अस्वीकार्य नजिर हो । अव त लाज लाग्नुपर्ने हो दलहरुलाई । संविधान जारी भएको तेश्रो वर्ष लागिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनिरहेका छन् । ९१ प्रतिशत जनमतले जारी गरेको संविधान तीनवर्ष पछि पनि कार्यान्वयन हुन्छ, हुन्छ भनेर प्रतिक्षामा छ भने यो निर्माताकै बेइजति हो कि होइन ? र, तीन वर्ष पुरै संविधान संशोधनको मामिलाले समस्याग्रस्त रह्यो र संविधान संशोधनको मुद्दाले सरकार परिवर्तन भइरहे । अहिले पनि संविधानमा आधा जनसंख्याको विमति रहेको अवस्था छ । ९१ प्रतिशत सांसदले जारी गर्ने, ५१ प्रतिशत जनसंख्याले संविधानमा बिमति राख्ने, झण्डै १५ प्रतिशतले संविधान नै नमान्ने र यसमाथि हिन्दु र राजतन्त्रवादीले त संवैधानिक मुद्दाहरु जनमत संग्रहबाट सल्टाउन सुझाव दिइरहने, आन्दोलन गरिरहने ? यस्तो संविधान खोटो नभए के हो ? चल्नै नसक्ने मुद्रा र संविधान उस्तै उस्तै भयो कि भएन ? ठूला दलहरु आलोपालो सरकारमा जानु र भागबण्डामा राज्यसञ्चालन गर्नु संविधानको कार्यान्वयन हो भने त्यो विचारको कुनै ओखती छैन । आत्मरति हो, जति गरे पनि छुट छ । कार्यान्वयन कार्यान्वय भन्दाभन्दै संविधानरुपी अमृत विष नबनोस्, ठूलो दुर्घटनाले रक्तपात नमच्चियोस् । विवाद ठूलो छ र विवाद सुल्झाउने अक्किल र नेतृत्व छैन । राजनेता नहुनुले देशमा ठूलै संकट देखिदैछ ।
२०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ठ भनियो, त्यो सामुहिक दस्तावेज थियो, चलेन, च्यातियो ।२०७२ सालको संविधानलाई पनि उत्कृष्ठ भनिएको छ, पटक पटक आगोमा झुल्सिसक्यो, च्यातियो पनि । यो संविधान खोटो छ भन्ने आवाज गुञ्जिरहेको छ । यस्तो संविधान कसरी चल्ला र ? त्यसै पनि अदालतका न्यायाधीशसमेत भागबण्डामा नियुक्ती हुन थालेको छ, त्यस्ता न्यायाधीशहरुले दलप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्लान् कि संविधानप्रतिपको ? यसकारण पनि यो खोटो संविधान कार्यान्वयनमै मर्नेछ । कार्यान्वयनको क्रममै समाप्त हुनेछ । अहंकार गर्दा र विभेदको नीतिले ग्रस्त हुँदा शान्ति र संविधान कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने अवस्था आइसकेको छ । अझै पनि राजनीतिक नेताहरुले कुनै शक्तिमाथि बिभेद राख्नु उचित होला र ? सबैको साझा चौतारी बन्नसके न संविधान हो । सत्ताधारीले पूजा गर्ने र आमनागरिकले कुल्चने ग्रन्थ बन्यो भने त्यस्तो संविधानले एउटा शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिैदै अर्को क्रान्तिलाई निम्तो दिनेछ । देशलाई १० वर्षको रक्तपातबाट मुक्त गराउन खोज्दा अनन्तकालसम्म रक्तपातको सूत्र यही संविधानलाई बनाउने कि नबनाउने ? जनताबादी को हो र होइन ? यसको परीक्षा भइरहेको छ । लोकतन्त्रवादीहरुले आफ्नो व्यवहारबाट कति देशभक्त, स्वाधीन र जनवादी भनेर पनि देखाइसकेका छन् । यिनले कम्युनिष्ट केन्द्र खोल्नु भनेको पनि सत्ताकै लागि हो । एउटा शक्तिलाई पछारेर सान्चा पहलमान बन्ने सपना मात्र हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २५, २०७४ समय: १९:४९:२०